Hay’adda CID oo su’aalo weydiineysa shaqaale ka tirsan Zamzam Foundation – Banaadir weyne
Hay’adda Dembi Baarista Qaranka ee CID ayaa bilowday in ay su’aalo weydiiso shaqaale caafimaad, oo ka tirsan Hay’adda Zamzam Foundation, faraceeda Gobolka Shabellaha Dhexe.
Rag ku labisnaa dareyska Ciidamada Militariga, isla-markaana wejiyada soo qarsaday ayaa sideed qof oo toddobo ka mida shaqaalaha hay’adaasi ahaa ka kaxeystay deegaanka Gololey, iyagoona wax yar ka dib dilay.
Shaqaalaha iminka su’aalaha lagu weydiinayo Xarunta Hay’adda CID ee Magaalada Muqdisho oo dhawr dumar ah ayaa gelinkii dambe ee shalay soo gaaray Caasimadda Muqdisho.
Masuuliyiinta Hay’adda CID oo Magaalada Muqdisho ku qaabilay odayaasha shaqaalihii caafimaad ee lagu laayay Gololey ayaa waxay u sheegeen in baaritaan deg deg ahi ay samayn doonaan, natiijadana ay dib ugala soo wadaagi doonaan.
Hay’adda CID ayaa waxay hadda baareysaa ciddii ka masuulka ahayd falkaasi lagu laayay shaqaalahaasi, inkastoo siyaabooyin kala duwan dilkooda loogu eedeeyay Ciidamada Dowladda iyo maleeshiyada Al Shabaab. – Universal TV Somali